faafaahin ku aadan qaraxyo xalay ka dhacay Wajeer iyo Xerada Ifo. | Starfm.co.ke	Wednesday, May 22nd, 2013	Home
faafaahin ku aadan qaraxyo xalay ka dhacay Wajeer iyo Xerada Ifo.
Published on May 27, 2012 by Sacdiya Garabey · 1 Comment
Share27.May.2012: Waxaa dagan xaalada amaan ee xerada qaxootiga ee Ifo oo xalay uu ka dhacay qarax qasaare gastay.
Qaraxaasi xalay ka dhacay Xerada qaxootiga ee IFO Iskuul ku yaala ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 4ruux oo rayid ah,waxuuna cabsi ku abuuray qaraxaasi dadka ku dhaqan deegaankaasi.
Dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa ahaa shaqaale dhisayay qaybo ka mid ah iskuulka oo dhisme ku socday.
Sidoo kale waxa uu xalay qarax ka dhacay gudaha dagmada wajeer kaas oo isna gaystay qasare.
Qaraxaas ayaa ka dhashay kadib markii wal xaha qarxa lagu tuuray Hotel ay dad badani television ku daawanyeen oo ku yaala dagmada wajeer,waxaana ku dhaawacmay hal ruux.
Dhawaacyada qaraxyadaas ayaa la sheegayaa in qaarkood ay yihiin kuwa halis ah.
Ciidamada Booliska ayaa howlgalo iyo baaritaano ka wada deegaanadaasi si loo xaqiijiyo amaanka goobahas.
Mohamud Abdille Adan says:	May 27, 2012 at 12:04 pm	wa ana mohamud abdille adan oo hada kusuqan meru county hadan fikradeya kadibta wahan dihi laha qaraxaas ciidamada shababka aya kuluglaxa ii doy ba reer wajeer ay ba kubiiren kohda al-shabaab.